သင်္ဘောပေါ်လစီ - Schmidt ခရစ်စမတ်စျေးကွက် သင်္ဘောပေါ်လစီ - Schmidt ၏ခရစ်စမတ်စျေးကွက်
ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀ အထက်အမှာစာအားလုံးကိုအခမဲ့ပို့ပေးသည် အထူးလျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင့်တစ်ခုအတွက် sign up!
ယူအက်စ်တွင်ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်အမှာစာအားလုံးကိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း
အထူးလျှော့စျေးနှင့်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင့်တစ်ခုအတွက် sign up!
အကောင့်၀င်ခြင်း အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း စျေးဝယ်လှည်း0
ခရစ်စမတ် Blog တစ်ခု
အောက်ပါရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ပြန်လာခြင်းပေါ်လစီသည် Schmidt ခရစ်စမတ်စျေးကွက်ပိုင်နှင့်လည်ပတ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်သည်။
ယူအက်စ်တွင် Standard Shipping သည်အမှာစာအားလုံးကိုဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ၁-၅ ရက်မှ ၁-၁၀ ရက်အထိပုံမှန်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ Covid-20 သည်ဤအချိန်အတွက်နှောင့်နှေးမှုကိုထည့်နိုင်သည်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရန် ၁ ရက်မှ ၅ ရက်ထိကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၁-၃ ရက်ကြာသွားနိုင်သည်
ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတင်ပို့နိုင်သည်။ သင်မှာယူမှုပြုသည့်အခါသင်၏ပစ္စည်း (များ) ရရှိနိုင်မှု၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းနှင့်သင်ပို့မည့်ပစ္စည်း၏ရရှိနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ပေးပို့မည့်ရက်ကိုခန့်မှန်းပါမည်။ ယူအက်စ်တွင် Standard Shipping သည်ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်ဖြင့်အမှာစာအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းများကိုမှာယူပြီးနောက် ၁ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်းရောင်းမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ပစ္စည်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် ၁-၁၀ ရက်အပြီးမှာကြားပြီးသည်။ အကယ်၍ သင်၏အမှာတွင်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ထုံးစံအတိုင်းကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်ပါကအမှာစာတစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်အမှာစာအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ US Wharehouses မှပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပတ်အောက်ဖြစ်သည်။ ဂျာမန် Warehousestypically မှပုံမှန်တင်ပို့ချိန်သည် ၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်အထိမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို Covid-1 ၏သက်ရောက်မှုကိုခံရနိုင်သည်။
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အော်ဒါမှာယူမှုသည်ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်။
အလျင်အမြန်ရေကြောင်းသည်ဏသင်၏ကုန်ပစ္စည်းအခွန်ကိုမပါ ၀ င်ပါကသင်၏ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းနှင့်ပစ္စည်းအရေအတွက်အရသတ်မှတ်ထားပါသည်။
၂။ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းမူဝါဒ၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်း
ဤဝေါဟာရများနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ လာရောက်ပါ ထောက်ခံမှုစင်တာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိသောသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်သာဆက်သွယ်ပါ
Support @ schmidtခရစ္စမတ်.com
27351 ဘလူးဘယ်ရီဟေးလ် Drive ကို
Oak Ridge မြောက်အမေရိက, TX 77385
© 2021 Schmidt ကခရစ်စမတ်ဈေး
သငျသညျဖန်တီးလျက်သင့်လိုချင်သောစာရင်းရှုမြင်သို့မဟုတ်အကောင့် login နိုင်ပါတယ်။
အီးမေးလ်က ## customer_email ## မှတဆင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးပေးပါ